Miisaaniyad: Kordhinta taageerada dhaqaale ee dhismaha hooyga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ciddii xoogga la saari lahaa dhaalin yarada mise dan yarta. sawir: Jessica Gow/TT
Miisaaniyad: Kordhinta taageerada dhaqaale ee dhismaha hooyga
La daabacay måndag 16 september 2019 kl 09.11
Si tartiib tartiib ah ayaa kor loogu qaadi doonaa taageerada dhismaha guryaha kirooyinka loo galo, middaasina oo la gaarsiin doono saddex bilyan oo koron sannadkii, sida ey heshiis ku wada gaareen dawladda iyo xisbiyada ey gacan saarka ku leeyihiin miisaaniyadda, sida uu qoray war geeyska maalinlaha ee Svenska Dagbladet.
- Middaan ayay macnaheedu tahay in dib loogu laabto heerkii ay taageeradaasi dhaqaale gaarsiisnayd wixii ka horreeyey doorashadii 2018. Tallaabadan ayaa muhiimad ballaaran ugu fadhida xisbiga aan ka tirsan ahay ee socialdemokrater-ka, maadaama ay baahi aad u ballaaran uga jirto dalka baaxaddiisa , sida ay sheegtay wasiirka dhaqaalaha Sweden Magdalena Andersson (S) oo u warrantay wakaaladda wararka sweden ee TT.
Balse taageeradan ayaa lagu xiray shuruudo hor leh – iyo in saami guryahaa ka mid ah loo qoondeeyo ”gaar ahaan kooxaha tabaaleeysan”, sida uu sheegay wasiirka guriyeeynta Sweden Per Bolund (MP). Iyadoona dhismooyinka cusub ugu yaraan 5% ey noqdaan waxa lagu magacaabo qandaraasyada bulshada - sociala kontrakt. Shuruuddan ayaa la saari doonaa taageerada maal gelinta dhismooyinka ee dhammaan degmooyinka dalka.
Goolka laga leeyahay ayaa ah sidii looga gacan siin lahaa degmooyinka dhibaatooyinku ka haystaan sidii ey hooy aan qaali ahayn ugu heli lahaayeen dhammaan muwaadiniintooda.
Waxaanse illaa iyo hadda aan weli la go’aamin habkii loo maareeyn lahaa is bedellada taageerada dhaqaale ee dhismooyinka hooyada, sida ay sheegtay Magdalena Andersson.
- Waa warbixin gaaban oo loo kala direy cidda ay khuseeyso sidii ey uga soo talo bixin lahaayeen laba su’aalood. Midda koowaad in xoogga la saaro dhallin yarada iyo midda labaad in lagu hago dadka dhibaatooyinka u dhega nugul ee dan yarta ah. Waana mid iminka la sugeyo talo bixinnadii si ay dabadeed dawladdu uga go’aan gaarto, sida ay sheegtay Andersson.
Miisaaniyadda dayrta 2019